Tag: cms iphone ngwa | Martech Zone
Tag: cms iphone ngwa
Rụ ọrụ na ndị ọchụnta ego na-aga nke ọma n'afọ ole na ole gara aga abụwo onye na-emeghe anya m. M na-abụkarị onye na-eche echiche, mana m na-ele ka ndị ọzọ na-egbu echiche ndị ahụ wee nwee ọganiihu karịa m. Compendium bụ otu n'ime echiche ndị dị ịtụnanya - ma ugbu a ọ bụ ụlọ ọrụ na-abawanye nha afọ karịa afọ. Otú ọ dị, ọ bụghị okpukpu abụọ n'ihi echiche ahụ. Ọ bụ okpukpu abụọ n'ihi na Chris Baggott na Ali Sales gburu na
Ka m na-eche ụgbọ elu m ụnyaahụ, echetara m ihe abụọ ahụ m chefuru - jaket egwuregwu m na otu akwụkwọ dị na m ka m gụọ ikpo. Luckily, ụlọ ahịa ahụ n'ọnụ ụzọ m nwere ezi uche akwụkwọ nhọrọ na Outliers: The Story to Success, nke Malcolm Gladwell, nọ n'ebe ahụ. Abụwo m onye na-akwado Malcolm Gladwell nke ọma - ma na New Yorker na akwụkwọ ya. Na Gladwell, Companylọ Ọrụ Na-ebu Ọnụ dere, sị: